Mwepu nke onye isi ụlọ ọrụ | Law & More BV
blog » Ismhapụ onye isi ụlọ ọrụ
Ismhapụ onye isi ụlọ ọrụ
Ọ na - eme mgbe ụfọdụ na a ga - abụ onye isi ụlọ ọrụ chụọ n'ọrụ. 'Szọ maka ịchụpụ onye isi ụlọ ọrụ ga-ewere ọnọdụ dabere n'ọnọdụ iwu ya. Enwere ike iche ụzọ ndị isi abụọ n'ime otu ụlọ ọrụ: ndị isi iwu na ndị isi ụlọ ọrụ.
A Onye isi nchịkwa nwere ọnọdụ iwu pụrụ iche n'etiti ụlọ ọrụ. N'otu aka, ọ bụ onye isi ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, nke General Nzukọ nke Ndị Na-ekenye ma ọ bụ Kọmitii Na-ahụ Maka Nchịkwa nke a dabere na iwu ma ọ bụ isiokwu nke mkpakọrịta yana ikike dị ka ndị na-anọchite anya ụlọ ọrụ ahụ. N’aka nke ọzọ, a na-ahọpụta ya dị ka onye ọrụ nke ụlọ ọrụ dabere na nkwekọrịta ọrụ. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ime ihe iwu na-ahụ maka ọrụ, mana ọ bụghị onye ọrụ “nkịtị”.
N'adịghị ka onye isi ndị ahịa, a onye isi otu abụghị onye isi ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na ọ bụ naanị onye isi n'ihi na nke ahụ bụ aha ọkwá ya. A na-akpọkarị onye nduzi aha ya bụ "onye njikwa" ma ọ bụ "osote onye isi." Ọ bụghị General Nzukọ nke Ndị Na - eketa ma ọ bụ onye na - ahụ maka ndị na - ahụ maka ọrụ, ahọpụtaghị onye isi otu ụlọ ọrụ. Enwere ike inye ya ikike maka nke a. Onye na-ahụ maka ọrụ na-ahọpụta onye ntụzi aka ọrụ ya, yabụ, onye ọrụ 'nkịtị' nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ofzọ nke mgbasa
Maka a Onye isi nchịkwa iji chụpụ ya n'ụzọ iwu, ma ụlọ ọrụ ya na ọrụ ya ga-akwụsị.
Ikwusi mmekorita nke ulo oru, nkwekorita nke iwu kwadoro site na Nzuko nke ndi nweko ma obu ndi nlekota oru. A sị ka e kwuwe, site na iwu ahụ, enwere ike kwụsịtụrụ ma chụpụrụ onye isi na ngalaba ọ bụla nwere ikike ịhọpụta. Tupu nchụpụ onye isi ahụ, a ga-arịọrịrị ndụmọdụ site na Kọmitii Ọrụ. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ ga-enwerịrị mgbakwasị ụkwụ maka nchụpụ, dị ka ebumnuche azụmahịa-nke na-eme ka ọnọdụ ahụ nwetakwu, mmekọrịta na-enweghị ọrụ na ndị na - ekenye ma ọ bụ enweghị ike nke onye isi maka ọrụ. Na ngwụcha, a ga-agbaso ihe ndị a achọrọ maka ihe gbasara achụpụ n'okpuru iwu ụlọ ọrụ: na nnọkọ nzuko nke ndị na - eketa oke, enwere ike ịnabata onye isi otu nzukọ Nzukọ Ndị Na - ekenye ihe ma na - adụ ọdụ Nzukọ Nzukọ nke Ndị Na - ekere òkè banyere mkpebi mgbasa.
Maka nkwụsị mmekọrịta ọrụ, ụlọ ọrụ kwesịrị inwe ezigbo mgbagha maka ịchụ ya na UWV ma ọ bụ ụlọ ikpe ga-ekpebi ma ihe ezi uche dị otú ahụ dị. Naanị mgbe ahụ enwere ike iwere onye were ya n'ọrụ ọrụ n'ụzọ nkwekọrịta. Agbanyeghị, ewezuga usoro a metụtara onye isi iwu. Agbanyeghi ezi ihe achọrọ maka ịchụpu onye isi ụlọ omebe iwu, ule nchụpụ ahụ anaghị egbochi ya. Yabụ, mbido maka onye isi iwu bụ na, n'ụkpụrụ, nkwụsị mmekọrịta ya na-ebute nkwụsị mmekọrịta ọrụ ya, belụsọ ma ọ bụrụ na amachibido iwu ma ọ bụ nkwekọrịta ndị ọzọ.
N'adịghị ka onye isi iwu, a onye isi otu bụ naanị onye ọrụ. Nke a pụtara na iwu "nchụpụ 'kwesịrị' gbasara ya, ya mere na-enwe nchekwube kachasị mma gbasara nchụpụ karịa onye isi nchịkwa. Ebumnuche ndị achụrụ onye ga-ewe ya ọrụ ga-aga n'ihu na nzipu ya, bụ n'ihe banyere onye isi ụlọ ọrụ, ka anwale tupu ha emee. Mgbe ụlọ ọrụ chọrọ ịchụpu onye isi otu, ọnọdụ ndị a ga - ekwe omume:
mgbasa site na nkwenyerịta
mgbasa ozi site na ikike mgbasa ozi si UWV
allọ ikpe mpaghara mpaghara agbahapụ
Mmegide megide mgbasa
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ enweghị mgbakwasị ụkwụ maka ịchụ ya, onye isi ụlọ ọrụ nwere ike ịchọ ka akwụghachi ha ụgwọ dị mma, mana, n'adịghị ka onye isi ụlọ ọrụ ahụ, enweghị ike ịchọ iweghachite nkwekọrịta ọrụ. Na mgbakwunye, dị ka onye ọrụ nkịtị, onye isi nke iwu nwere ike ịkwụ ụgwọ mgbanwe. N'ihi ọnọdụ ya pụrụ iche na ihe megidere ọnọdụ onye isi ụlọ ọrụ aha ya, onye nhazi iwu nwere ike emegide mkpebi nchụpụ ahụ na usoro dị mkpa.
Ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ na-emetụta ezi uche nke mgbasa. Onye nduzi ahụ nwere ike ịrụ ụka na a ga-agbasa mkpebi maka nchụpụ maka mmebi nke ezi uche na ikpe ziri ezi n'ihi ihe iwu kwadoro gbasara nkwụsị nke nkwekọrịta ọrụ na ihe ndị ọzọ kwenyere. Agbanyeghị, ụdịrị arụmụka a site n'aka onye isi nke iwu siri ike anaghị eduga n'inwe ihe ịga nke ọma. Rịọ arịrịọ na mkpebi ga-abụ ma ọ ga-enwe nsogbu ọ bụla nwere ike inwe nnukwu ihe ịga nke ọma.
Ihe mgbakwasị ụkwụ na-emetụta usoro ime mkpebi n'ime Nzukọ Ndị Isi Ekekọrịta. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na esoghị iwu dị elu, njehie zuru oke nwere ike ibute nkagbu ma ọ bụ kagbuo mkpebi nke Nzukọ Ndị Ekekọrịta General. N'ihi nke a, enwere ike ịtụle onye isi ụlọ ọrụ elele na-ahapụbeghị ya anya ma ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịgbagha ụgwọ maka ụgwọ ụgwọ oke. Iji gbochie nke a, ọ dị mkpa na a na-agbaso usoro iwu nke mkpebi nchụpụ.
At Law & More, anyị ghọtara na ịchụpụ onye isi nwere ike inwe nnukwu mmetụta na ụlọ ọrụ yana onye isi ya. Ọ bụ ya mere anyị ji enwe usoro elele anya nke ọma. Ndị ọka iwu anyị bụ ndị ọkachamara na ngalaba ọrụ yana iwu ụlọ ọrụ ma nwee ike ịnye gị nkwado iwu n'oge usoro a. Ọ ga-amasị gị nke a? Ka ị nwere ajụjụ ndị ọzọ? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More.
Previous Post Nbipụta na ikike ihe osise
Next Post Inggbanwe aha mbu